Umthandazo womthengisi wokuthengisa. ? [Ukuze ishishini liphumelele]
Umthandazo womthengisi wokuthengisa ngakumbi nangakumbi. Ukuba neshishini, ukuziqeshisa, okanye ukusebenza njengomthengisi kunye nokufumana ikhomishini kuneengenelo ezininzi, kodwa kukho imiceli mngeni emikhulu. Intengiso kunye noqoqosho zihlala zitshintsha kwaye umda awusoloko uyintlanzi.
Kukho nemiceli mngeni yobuqu. Ngamanye amaxesha, sijongana neengxabano zangaphakathi okanye iingxaki zosapho ezisisusa ekugxileni.
Zininzi izinto ezinokubangela ukuba intengiso yehle. Ngezi yure, ukongeza ekufuneni ukuthengisa okutsha, inkonzo kunye neendlela zokuthengisa, umzekelo, abantu bafuna uncedo lokomoya.
La Isigwebo somthengisi Ukongeza ekubeni ngumzuzu wokunxibelelana naphezulu, kunceda abantu ukuba bazole iintliziyo neengqondo zabo. Ngeemvakalelo kwindawo, kulula ukubona izisombululo kwaye ufumane iindlela ezintsha.
0.1 Umthandazo womthengisi wokuthengisa ngakumbi nangakumbi. Uyisebenzisa nini
1 Umthandazo wokuthengisa ngaphezulu
1.1 Umthandazo wokuthengisa kakhulu
1.2 Ukuthengisa ngomthandazo
1.3 Umthandazo ukuze uphumelele kurhwebo
1.4 Ukubaluleka komthandazo womthengisi
Umthandazo womthengisi wokuthengisa ngakumbi nangakumbi. Uyisebenzisa nini
Umthandazo kufuneka ube yinto yemihla ngemihla kubomi bomthengisi kuba kukutya komphefumlo. Ngokufanelekileyo, kufuneka sisebenzise i Umthandazo njengohlobo lombulelo ngeentsikelelo ezininzi ezifunyenweyo.
Nangona kunjalo, kukho amaxesha apho kubonakala ngathi izinto azihambi kakuhle kwaye sicela ukukhuselwa kunye nokukhanya akukhathaleli.
Abathengisi bahlala kwiikomishini. Ukuba abanakuthengisa, umvuzo wabo uyancipha kwaye unokubangela iingxaki kusapho lonke. Kuthatha ukholo olungaka ngoku.
Kuya kufuneka ucele kuThixo kubaxumi abatsha ukuba bangene ebomini bakho kunye nokufezekisa iinjongo zakho.
Elinye ixesha elifanelekileyo lokufaka isicelo ezulwini xa uza kuqala ishishini elitsha okanye uqalise ukuthengisa imveliso entsha. OIsidlo somthengisi siya kuvuthuza imimoya elungileyo kwaye ithamsanqa iya kuhamba naye.
Apha ngezantsi kukho ezinye imithandazo yokuba uthengise kakuhle.
Umthandazo wokuthengisa ngaphezulu
“Bawo, Bawo othandekayo, Thixo uSomandla, ndiyabiza igama lakho elingcwele apha. Ndingumthengisi kwaye ndifuna uncedo lwakho, ndiqonda ukuba ndifuna ukutyala ukuze ndivune, ndizabalaza ukufumana iziphumo.
Ke ndiyathandaza kuba kubhaliwe encwadini yakho engcwele, kuba ukholo ngaphandle kwemisebenzi lufile, kwaye ndiyavuma ukuba sele ndityalile, ndilwe, ndalwa, ndalwela intsikelelo.
Ndivulele iingcango, Nkosi. Kwigunya andinike lona iNkosi, ndophakamisa izwi lam nxamnye nawo wonke umona, yonke intambo nayo yonke imehlo elikhulu elizama ukuthintela iindlela zam.
Kwaye ndiyaprofeta ngolu hlobo: ukuchuma! Intengiso mayibe ntle njengangoku!
Ngegama likaYesu Krestu!
Umthandazo wokuthengisa kakhulu
“Enkosi, enkosi kweli thuba ondinike lona ngolu suku.
Andikuceli ukuzola emsebenzini wam, kodwa ukhuseleko, ulingano noxolo.
Kuyandinika nobulumko obuya kundenza ndizive umahluko phakathi kokulungileyo nokubi, ukuba ndenze ngokuziphatha nangokuthembekileyo.
Kuyandikhuthaza ukuba ndixabise olu suku njengokugqibela kobomi bam kunye nokusebenza ngamandla, inkuthazo novuyo.
Kwaye ukuba kukho nayiphi na indebe ebibekelwe mna, ndifanele.
Ndincede ndiqonde abathengi bam, ukuba ndibathanda bonke njengoko banjalo, ukuba ishishini lihamba xa kunjalo ukwanelisa abathengisi kunye nabathengi.
Ngamana inkampani endiyimelayo ingayivuyela kakhulu iinzame zam kwaye ndiyazingca ngokusebenza apho.
Ndicela ukhuseleko apho ndisebenza khona, abantu abakhona, amalungu osapho lwam alindele lukhulu kum kwaye ndicela intsikelelo yabo.
“Thixo wam, Somandla, ndiyazi ukuba nguwe kuphela onethemba lezinto zonke. Ndiyazi ukuba nguwe kuphela onokutshintsha nayiphi na imeko, ke, Thixo wam, ndiyakubongoza, kuba ndifuna uncedo kunye nentsikelelo yakho.
Ndiyazi ukuba andifanelanga nto, kodwa ndiyazi ukuba unenceba kwaye ulungile. Ndiyakucela ukuba ungazijongi iimpazamo nezono zam, kodwa kuphela ukholo lwam kunye nokuthembela kuwe.
Thixo wam, iNkosi iyazi ukuba ndifuna kangakanani ukuphumelela kwaye ndifuna ishishini lam ukuqhubela phambili, kodwa ubonile ukuba akubanga lula kwaye abantu abanamdla kwinto endiyibonayo. Bawo, ndiyakubuza ngalo lonke ukholo lwam kunye nentembelo yokuba bonke abajonga i-facade yam baziva benomnqweno wokungena kwivenkile yam, ukuba bonke abadlula ngomnyango abanakuqhubeka ngaphandle kokungena kwivenkile yam. Wonke umntu endimaziyo kwaye uyazi ukuba le venkile ikhoyo iyaziva imfuneko yokuza kwishishini lam. Thixo wam, ndingathengisa yonke imihla kwaye ndivumela wonke umntu ongena kule venkile ukuba aphume apha asikelelekile, achumile kwaye akhuselekile kwaye uhlala ebuya nokukhanya kunye nezinto ezakhayo.
Ndiyabulela kuThixo kubo bonke abantu iNkosi eya kuthumela apha. Enkosi ngokundomeleza nokungandivumeli ukuba ndinikezele. Ndisikelele nakwintengiso yendawo yangapha kwam. Ngegama likaYesu. Amen!
Umthandazo ukuze uphumelele kurhwebo
“Thixo, enkosi kakhulu. Imimoya ekhuselayo yale venkile, ebonakalayo namhlanje yabathengi abaninzi. Enkosi ngokusikhokela ukuba sisebenzele ukonwaba kwabantu abangakumbi.
Andikwazi ukwenza nantoni na ngamandla am, kodwa kunjalo amandla kaThixo owenza lo msebenzi ngam.
Ndinqwenela ukuba uzuko lukaThixo lukhanyisele wonke umthengi okule venkile, ebakhokela ukuba basoloko besempilweni, bonwabile kwaye bephumelela. Enkosi. Enkosi."
Ukubaluleka komthandazo womthengisi
Njengoko besitshilo ngaphambili, i umthandazo kukutya komphefumlo. Xa kuthelekiswa nomzimba wethu, ukuba asityi isixa esithile sezondlo eziyimfuneko mihla le, umzimba wethu uya kuqala ukusabela gwenxa. Unokuphuhlisa i-anemia, umzekelo.
Inkqubo efanayo yenzeka kunye nobomi bangaphakathi. Ukuba asiluhlakuleli ubomi bomthandazo yonke imihla, umphefumlo wethu uya kusulelwa sisifo esibulalayo ngokomoya. Kufuneka sinyamekele iintliziyo zethu ukuze ukholo lwethu luhlale luvuselelwa eluthandweni nasinethemba.
La Isigwebo somthengisi sokuthengisa sineenzuzo ezininzi. Oyena uphambili kukuba agonywe ngokungakhathali.
Ngapha koko, abo bathandazayo bonwabile ngakumbi, jonga ubomi ngothando oluninzi, bamkele abazalwana babo ngomsa ongakumbi. Zonke ezi ndlela zokucinga zinceda inkqubo yokuthengisa, ke unokuthengisa ngakumbi nangakumbi.
Ukholo, ukuzinikela, inkuthazo, uvuyo kunye nethemba zizinto eziphambili zomhla wakho. Thandaza ngokuzithemba kwaye ukuthengisa kwakho ngekhe kukushiye!
Kuba akukho ncedo lukhulu, funda ne-7 imibono engaphelelanga ukuba unyuse ukuthengisa kunye nokukhulisa ishishini lakho!